Unobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili utyelelo lwaseburhulumenteni eZambia
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Unobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili utyelelo lwaseburhulumenteni eZambia
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Cinezela iZaziso • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
UNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili utyelelo lwaseburhulumenteni eZambia.
Unobhala Jikelele wabuliswa ekufikeni kwakhe ngu-Mphathiswa Wezokhenketho kunye nezoBugcisa, Zambia, u-Ronald k. UChitotela kananjalo u-Charles Romel Banda (owayesakuba ngu-Mphathiswa Wezokhenketho nezoBugcisa) ophethe isikhundla soRhulumente waseKhaya.
Ummeli osisigxina kwi-UNWTO, uNozakuzaku uChristine Kaseba wayekhona ukwamkela abathunywa.
Usuku lokuqala lubandakanya intlanganiso yamazwe amabini kunye noMphathiswa osandula ukumiselwa kunye nokwamkelwa kweevenkile kunye nabachaphazelekayo bezokhenketho baseZambia kwihotele iTaj Pamodzi, eLusaka Zambia.
IZambia lilungu leBhunga elinoLawulo oluPhezulu le-UNWTO.